Izingane Kate Middleton noPrince William bazihlukanisa ngokuziphatha okubi emshadweni ka-anti wabo
Izolo e-Great Britain kwakukhona umcimbi okwakulindeleke abaningi. UPippa Middleton, udade waseDuchess of Cambridge, washada nomthandi wakhe uJames Matthews. Umshado wenziwa esifundeni saseBerkshire edolobheni lase-Englefield. Ebandleni laseSt. Mark, ngaphezu kwezivakashi ezingama-300, izihlobo eziziwayo zikaPippa - Udadewethu Kate nomyeni wakhe, uMnumzane William kanye nabantwana: uCharlotte noGeorge, kanye noPrince Harry. Kwaba bantu begazi lobukhosi ukuthi ukunakwa okukhulu kunakhokhelwa kumaphephandaba nakubo bonke abakhona.
UK Kate wayebukele izingane eduze
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, izintatheli zabhala ukuthi udadewabo omakoti ngeke abe khona emcimbini womshado. Nokho, njengoba kuvele izolo, bekungakalungi. U-Kate wathola indima enzima kulo mcimbi - ukuqapha izingane, hhayi kuphela ezakhe, kodwa futhi abangabazi. Njengobe uMnyango wezokuHlangana wezeMpilo ukhulume ngaphambili, ukhathazekile kakhulu ngalolu dumo, ngoba uCharlotte noGeorge bazodinga ukusabalalisa ama-rose petals eceleni kwekhabethe, futhi lapho bekhuluma ngokunciphisa amakhosi amancane awahambisani nemithetho kahle.
Kate Middleton nezingane
Njengoba izithombe ezitholakala embukisweni wezithombe, uK Kate wayenenkinga ngezingane. Ama-pranksters amancane aphula umthetho womcimbi, ehamba ngezindlela ezehlukene, ekhuluma futhi ephikisana nesicelo sikaMiddleton sokusabalalisa amaphuzu. Abathwebuli bezithombe bakwazi ukufaka emakhamera abo "iminithi yokufundisa" esuka kuKate, lapho umama oqinile ekhuluma noGeorge noCharlotte, ebayisa ohlangothini. Futhi uma isikhulu esineminyaka engu-3 ubudala singathandi umama onjalo futhi washaqeka, uCharlotte oneminyaka engu-2 wayenecala elifanayo. Empeleni, lokhu akumangazi, ngoba abangane abaseduze bomndeni wasebukhosini bathi kusemvelo kakhulu kufana nomalume wakhe uHarry, okusho ukuthi uKate no-Uliyama bazolinda ezinye izimangalo ezihlobene nokuzikhethela kwe-heiress encane.
Catherine Middleton noCharlotte
Imininingwane ezithakazelisayo kakhulu nezithombe zomshado weNkosana uHarry noMegan Markle!
U-Chelsea Davy wakhuluma ngeNkosana uHarry ngehora lomshado wakhe noMegan Markle
Amakhosi angama-25 esizayo e-Great Britain
UMiddleton ohlangothini olubomvu olubomvu wabulala abaningi
UKeith, oneminyaka engu-36 ubudala, uvele emcimbini womshado ohlangothini olubomvu oluvela emthonjeni wakhe othandekayo u-Alexander McQueen. Ukugqoka kwendoda yabadoti kwakwenziwa ezinkambisweni zanamuhla, ezifana kakhulu nemfashini yama-80s ekhulwini lokugcina. Le ngubo yayine-bodyce ehlanganisiwe ne-coquette enomhlangano endaweni yesifuba, i-skirt e-fluffy ye-midi-length kanye nemikhono emithathu-ntathu ngamakhekhe. Isithombe sasihlanganiswa ngengubo enhle enezicathulo zombala nezimbali.
UPippa noCate Middleton
Lesi sithombe sithandwa kakhulu ngabesifazana befashini nabalandeli baka Kate ukuthi amakhasi okuxhumana nomphakathi ku-Intanethi agcwele ukubuyekezwa okuhle okuhlukene mayelana nokunambitheka okungeke kwenzeke kweMiddleton. Ngokuqondene nomakoti, uPippa naye wayekuthanda kakhulu konke. Okokuqala, walahlekelwa isisindo esiningi, okwenza ukuba abe nomdwebo, futhi okwesibili umklami uGiles Deacon wadala ngeqiniso izingubo zobukhosi, uPippa ayehamba kakhulu.
UPippa Middleton noJames Matthews
Prince William no Prince Harry
UPippa Middleton washada noJames Matthews
U-Emily Ратажковски uye waqoqa iqoqo elisha le-swimsuits Amore & Sorvete
U-Ian Somerhalder no-Nikki Reed
I-Neslihan Atagul noBurak Ozchivit - kusukela ebuhlotsheni kuya enzondo isinyathelo esisodwa
Abafundi baseHarvard babiza uRyan Reynolds "indoda yonyaka"
Abasebenzisi be-intanethi bagxeke isithombe sikaRihanna nomshana wakhe
UKashi Bennet wavuma ukuba ngumka-Usain Bolt, naphezu kokukhashelwa
U-Eddie Redmayne noHannah Bagshaw balindele ingane yesibili
ULeonardo DiCaprio, uMark Zuckerberg kanye nabanye abantu abanethonya kakhulu emhlabeni ohlangene nohlelo olukhethekile lwe-Time
Ukubeletha: iseluleko kumama onesihlengikazi
Iigilavu ​​ezimhlophe yizinhlobonhlobo ezinhle kakhulu zesifazane
Kungani siphupha ngamaplamu?
Isithombe sika-Harley Quinn nge-Halloween
"Inhliziyo" yeTyariyari evela e-organza - isinyathelo ngesinyathelo isigaba somsebenzi
Iikhijithali ezenziwe ngepulasitiki - ezithakazelisayo nezingabizi
Ukugcwalisa igumbi lamakhandlu egumbini
Yini engcono ukudla ukulahleka kwesisindo?
Indlela yokufihla amapayipi ekhishini?
U-Emily Ratjakovski ubonisa ukuhlobisa okungahle kunamathele
Izikebhe ze-Ski - zini nokuthi zingakhetha kanjani?
I-Pandora isongo segolide
Inkukhu in sauce okhilimu - iresiphi
I-lipolitics yokulahlekelwa isisindo
Kunokuphatha izibungu ekati?
Ukwelashwa kwe-pancreatitis nemithi - izinhlobo eziyisihlanu zemithi yokwelapha kanye nemithi yokwelapha